caashaqa ma lahan
Subject: Re: caashaqa ma lahan Mon May 31, 2010 8:20 pm
Odey iyo islaan reer uastralia ah oo cadeeyey in Caashaqu aanuu lahayn cimri iyo da’a uu ku joogsado ayaa isku guursaday dalkaa Australia. keith oo ah 86 jir ah iyo Dorothy Steven oo ah 85 sano, labadan shakhsi ayaa isku guursaday guriga lagu xanaaneeyo dadka waaweyn ee Bohmor.
Keith oo ah odeyga 86 jirka ah iyo dorothy Steven oo 85 jira ayaa ku wada noolaa guriga lagu xanaaneeyo dadka waaweyn mudo sagaal sanadood ah iyadoo ay dhex martay jacayl aad u weyn oo ay isu qaadeen, Keith oo ay xaaskiisii hore ee margaret dhimatay sanadkii 2000 kii ayaan hore ugu sheegin jacaylkiisa cusub ee Dorothy Steven oo iyadana ninkeedii tom uu geeriyooday sanadkii 1976 inuu doonayo inuu guursado ilaa bil ka hor oo uu arintaa usoo ban dhigay.
Dorothy Steven oo ka hadlaysay arintaa ayaa sheegtay in aanuu hore ugu sheegin inuu doonayo inuu guursado laakiin ay isu hayeen jacayl aada oo ay adkeyd inay kala maqnaadaan saacad qudha. Steven ayaa intaa ku daratay inuu keith weydiiyey ama ka codsaday inuu su’aal weydiin karo markii ay u sheegtay inay ogoshahay su’aashaa ayuu u soo bandhigay inuu doonayo inuu guursado iyadoo Steven arinkaa aad ugu faraxday isla markaana ugu jawaabtay Yes Yes Yes sadex jeer oo isku xiga.
Dorothy Steven ayaa waxa bixiyey wiilkeeda oo ay u dhashay ninkeedii hore isagoo ku wareejiyey gacantana u galiyey hooyadii ninkaa Keith ee ay wadaageen Cirada iyo Caashaqa.
By:Omar Suleiman Omar
Subject: Re: caashaqa ma lahan Fri Jun 04, 2010 8:27 pm
sxb waa wax lagu qoslo mahadsanid tita